दंगीशरणमा विकास निर्माणका योजना द्रुत गतिमा « Farakkon
दंगीशरणमा विकास निर्माणका योजना द्रुत गतिमा
दंगीशरण, २१ चैत । दंगीशरण गाउँपालिकामा चालु आर्थिक वर्षका विकास निर्माणका योजनाहरुको स्टिमेट तथा सम्झौता गर्ने काम धमाधम भईरहेको छ । गाउँपालिकामा जम्मा २ सय ५० वटा योजना रहेका छन् । जसमा ६२ प्रतिशत योजना कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढिसकेको योजना शाखा प्रमुख मस्तवीर चौधरीले जानकारी दिएका छन् । गाउँपालिकाका पूर्वाधार तथा विकास निर्माण योजना अन्तर्गत अन्य सार्वजनिकतर्फका २३ वटा योजनाहरुमध्ये १४ वटा योजनाहरुको निर्माण कार्य भईरहेको छ ।
त्यसैगरी सडक तथा पुल निर्माणतर्फका योजनाहरुमा ८७ योजनामध्ये ६२ वटा योजना सम्झौता भई कार्यान्वयनतर्फ अगाडि बढेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । त्यसैगरी खानेपानी संरचना निर्माण योजनातर्फका ११ वटा योजनामध्ये चारवटा योजनाहरुको सम्झौता भईसकेको योजना शाखा प्रमुख चौधरीले जानकारी दिए । त्यसैगरी विद्युत संरचना, पुँजीगत सुधार र सार्वजनिक निर्माण, भवन निर्माणका काम भईरहेको गाउँपालिकाको कार्यालयले जनाएको छ । यसका लागि ८ करोड ५४ लाख ५५ हजार बजेट विनियोजन भएको योजना शाखा प्रमुख चौधरीले जानकारी दिए ।
यस्तै वडास्तरका योजनाहरुमा १ सय १६ वटा योजना सम्झौता भई ६६ प्रतिशतभन्दा बढी योजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । वडा नं. १ का अध्यक्ष श्रीप्रसाद चौधरीका अनुसार वडा नं. १ मा विकास योजनाका ३० वटा योजना रहेका छन् । जसमा १५ वटा योजना सम्पन्न भईसकेका छन् भने ६ वटा निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका छन् र ८ वटा शुरु हुने प्रक्रिायामा रहेका छन् । यसको लागि ७३ लाख ६५ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
वडा नं.२ का अध्यक्ष तुलसीराम देवकोटाका अनुसार वडामा विकास निर्माण योजनाहरु ३२ वटा रहेका छन् । जसमा १८ वटा योजना स्टिमेट भईसकेका छन् भने आठवटा योजना सम्पन्न भईसकेका छन् । यसका लागि १ करोड ५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । वडा नं. ३ का अध्यक्ष पूर्ण बहादुर चौधरीका अनुसार वडामा जम्मा ३४ वटा विकास निर्माणका योजना परेका छन् । जसमा १५ वटा योजना स्टिमेट भईसकेको छ भने २ वटा योजना सम्पन्न भईसकेको छ । यसका लागि १ करोड ६१ लाख ३० हजार बजेट विनियोजन भएको छ ।
वडा नं. ४ का अध्यक्ष नेव बहादुर कवँरका अनुसार वडामा विकास निर्माणका ३९ वटा योजना रहेका छन् । जसमा १६ वटा योजना स्टिमेट भईसकेको छ भने १९ वटा योजना सम्पन्न भईसकेका छन् । यसका लागि ८७ लाख ९० हजार बजेट विनियोजन भएको छ । वडा नं. ५ का वडा अध्यक्ष दिपक गौतमका अनुसार वडामा विकास निर्माणका २९ वटा योजना रहेका छन् । जसमा ५ वटा स्टिमेट भईसकेका छन् भने १३ वटा योजना सम्पन्न भईसकेका छन् । ६ वटा सम्झौता भई कार्यान्वयनतर्फ गईसकेको छ । यसका लागि ९१ लाख १५ हजार बजेट विनियोजन भएको छ ।
वडा नं. ६ का अध्यक्ष टंक बहादुर वलीका अनुसार वडामा जम्मा २५ वटा विकास निर्माणका योजनाहरु रहेका छन् । जसमा २४ वटा स्टिमेट भईसकेको छ भने ८ वटा योजना सम्पन्न भइसकेका छन् । यसका लागि १ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।
वडा नं. ७ का अध्यक्ष विरबहादुर वलीका अनुसार वडामा २३ वटा विकास निर्माणका योजनाहरु रहेका छन् । जसमा २१ वटा सम्झौता भएर कार्यान्वयनतर्फ अगाडि बढेको छ भने ६ वटा योजना सम्पन्न भएका छन् । यसका लागि १ करोड २१ लाख ५ हजार बजेट विनियोजन भएको छ । वडास्तरका योजनाहरुको झण्डै ६० प्रतिशतको हाराहारीमा कार्यान्वयन प्रक्रियातर्फ अगाडि बढेको बताइएको छ । यस्तै गाउँपालिकाको विषयगत शिक्षा, महिला बालबालिका, स्वास्थ्य, कृषि र पशु सेवाको कामहरु पनि भइरहेको गाउँपालिकाको कार्यालयले जनाएको छ ।